U profil iglasi ye-Glass-Jumbo yeglasi yokhuseleko-Yongyu
Sazibandakanya nomzi mveliso weglasi yoyilo ukusukela ngo-2006
Inkxaso yomnxeba 0086-400-089-8280
I-LABER® U yeglasi yeprofayile
Ukusebenza okuphezulu kweglasi yephrofayili yenkqubo
Inkqubo encinci yeglasi ye-U yentsimbi yeglasi
Iitayile / iglasi / iphantsi ye-U ye-glitter
Umtya / iglasi yodonga
Dupont SGP iglasi emile yeglasi
Iglasi ekhuselekileyo yokhuseleko
Iglasi efudumeleyo kunye neglasi egalelweyo
Iiyunithi zeglasi ezisezantsi-E
Ukhuseleko lweglasi yezokhuseleko kunye neocingo
Iinkqubo zeglasi ze-ice rink
Izikhululo zeglasi yoKhuseleko / ucingo lweglasi yeocingo
Ukwahlula iglasi ukwahlula
Iglasi yokhuseleko yegumbi
Ukucoca / iglasi yensimbi encinciweyo
Iglasi eguquliweyo / efrathiweyo
Singabaxhasi be-SGCC kunye ne-CE evunyiweyo, iimveliso zethu zihlangabezana nemigangatho ephambili yokwakha iimveliso zeglasi.
Umsebenzi wethu: Sebenzani kunye ukuphumelela ukuphumelela, yenza umbono ocacileyo!
Iglasi yeYongyu, ukhetho lwakho olulungileyo lokwakha iimveliso zeglasi ezivela eTshayina.
Inkampani isekwe nguGavin Pan, obesebenza kumzi-mveliso weglasi ukusukela ngo-2006 kwaye unexesha elingaphezulu kweminyaka eli-10 kumava okuthumela kwelinye ilizwe. I-Yongyu Glass lilungu leVendor ye-US Ice Rink Association. Umbono wethu kukwabelana ngoncedo lothelekiso lomzi mveliso weglasi yezokwakha waseTshayina kunye nabathengi, ukubonelela abathengi ngesisombululo esineendleko, kunye nokufumana intsebenziswano phakathi kwabaphumeleleyo kunye nabathengi.
Sizibandakanye nomzi mveliso weglasi yokwakha sasebenzela abathengi bethu bobabini abavela eTshayina nakwamanye amazwe. Sifumana isisombululo esenzelwe umntu ngokweemfuno zabathengi, sincede abathengi ukuba bonge ixesha kunye nemali.
I-LABER ® Iglasi yeProfayile
Oololiwe beGlasi boKhuseleko kunye neocingo
Iglasi / iglasi yodonga iGlasi
Iglasi yoKhuseleko lweJumbo / Oversised
Umsebenzi oPhezulu weProfayile yeGlasi / ye-U's Glas ...
Iprofayile yeGlasi ye-Iron U / I-Glass ye-U ...
Sithatha ukuzibophelela ekunikezeleni iimveliso eziphambili zomgca kubathengi bethu base China, North America, nase Yuropa ukuze bafumane eyona nqanaba iphezulu yale nto siyenzayo.
Siyazingisa kwiimpawu zeemveliso kwaye silawula ngokungqongqo iinkqubo zokuvelisa, ezinikezele ekwenzeni zonke iintlobo.
Njengenkokeli eguqukayo yemveliso yokuvelisa iglasi, simisela umda weenkqubo zokwenza iinkqubo kuwo omabini amacandelo orhwebo kunye naworhwebo. Injalo indlela yethu yokukunika elona xabiso liphezulu kuyo yonke imveliso eyodwa, nokuba ufuna ukuba yenziwe ibe yeyakho okanye hayi.
I-Ceramic Frit & Frosted-Low-E ...
Iinkqubo zeGlass Rink zeeNkqubo
I-Dupont egunyazisiweyo ye-SGP iglasi enelitha
Iglasi yoKhuseleko lweGumbi lokuSebenzisa
Ukuba ufuna isisombululo semizi-mveliso ... Siyafumaneka kuwe
Sinikezela ngezisombululo eziphucukileyo zenkqubela phambili ezinzileyo. Iqela lethu leengcali lisebenza ukonyusa imveliso kunye nokusebenza kwexabiso kwimarike
Umbono wethu kukwabelana ngoncedo lothelekiso lomzi mveliso weglasi yezokwakha waseTshayina kunye nabathengi, ukubonelela abathengi ngesisombululo esineendleko, kunye nokufumana intsebenziswano phakathi kwabaphumeleleyo kunye nabathengi.
Iyunithi yeglasi efakelwe insimbi kwimitha ezili-12
Iglasi yeprofayile yomgangatho wangaphandle womhlaba ...
I-03,08,20Juni 16, 2017
Imeko yovavanyo: I-U U ...
I-24,07,20Juni 16, 2017
SGP enomsindo iglasi emile, igobile ...
Imveliso yesiseko seProfayile-ye-LABER U ...